Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Sh. Dhexe
Saraakiisha ciidmada sowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in dagaalo shalay meelo ka mid ah gobolka ka dhacay ay ku dileen ilaa iyo 70 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabab, dhinacoodana ay kaga dhinteen dagaalada askar iyo taliyahii Ururka 60-aad ee Ciidamaa Gorgor Gaashaanle Maxamed Cabdiwaaxid Faarax.
Maleeshiyada al-Shabab ayaa baraha taagera ee internetka ku sheegtay inay dagaalka ku dileen 18 ka tirsan ciidamada dowladda oo ay saddex sarkaal ku jireen.
Dagaalkan u dambeeyay ayaa yimid ka dib markii al-Shabab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Warciise.
Todobaadkii ugu danbeeyay waxaa ciidmada dowladda oo uu horkacayay Taliyaha Ciidanka Xoogga Soomaaliya General Odowaa Yuusuf Raage ay howlgallo ka wadeen tuulooyin ku yaala Shabeelaha Dhexe oo ay al-Shabab ku sugnaayeen.
Afhayeenka Xukumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimuu oo VOAda u waramay ayaa sheegay in tiro ka badan middan ugu danbeysay ee ciidamada laga soo xigtay ay al-Shabab kaga dhinteen howlgaladan intii ay socdeen.
Dhinaca kale, dagaaladan ayaa imaanaya xilli magaalada Jowhar ee xarunta gobolka laga soo sheegayo xaalad bani’aadnimo oo ka dhalatay daadad go’doomiyay magaalada muddo bil ka badan.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay tagay Jowhar si uu xaaladda u soo arko.